Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo fariin qoraal ah u diray dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya. | JILYAALE_ONLINE
Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) oo fariin qoraal ah u diray dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda KMG Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa la sheegay inuu difaacay Siyaasadda Dowladdiisa ee ku aadan Gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo Madaxweynaha iyo Jeneraalka Booliska Dowladda Cabdi Qeybdiid ay ka aaminsan yihiin inaan wax Maamul ah ka jirin isla markaana ay rumeysan yihiin in degaano ka tirsan Gobolkaas ay ku dhuumaalaysanayaan Indha Cadde iyo rag ka tirsan Maxkamadaha Islaamiga iyo Al Shabaab.
Hase ahaatee R/wasaare Nuur Xasan Xuseen (Nuur Cadde) ayaa lagu soo warramay inuu fariin qoraal ah u diray dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa qeyb ka mid ah qoraalkaas waxaa lagu xusay in Shabeellaha Hoose uu ka mid yahay Gobolada dalka ee deganaanshaha ka jira isla markaana loo baahan yahay in dadka ku dhaqan Gobolkaas oo u badan dad ku hoos nool wax soo saarka Beeraha laga caawiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay u kordhiyaan wax soo saarkooda.
Sida la sheegay Jen Cabdi Qeybdiid oo ah Taliyaha Booliska Dowladda Soomaaliya ayaa ku doodaya inuu xilkii Booliska ay u haayeen ka qaaday labo xubnood oo Maamulka Gobolkaas ka tirsan oo kala ah Cali Geney iyo Nuuriye Cali Faarax oo ahaa Taliyaha Booliska Gobolka Shabellaha Hoose iyo Kuxigeenkiisa.
Balse Cabdi Qeybdiid oo Siyaasad ahaan dagaal kula jira Maamulka Shabeellaha Hoose ayaa ka dhaadhiciyay Madaxweynaha in Gobolkaas la geeyo Ciidamo Boolis ah oo ah kuwa lagu soo tababaray dalka Ethiopia, arrintaas oo ilaa iyo hadda hortaagan Jen Gabre.
Waxaa jira dhibaatooyin aad ugu weyn oo ka dhex taagan tahay Guddoomiyihii Gobolkaas oo isna farta lagu fiiqayo iyadoo la rumeysan yahay inuu lug ku leeyahay xiisadaha ka taagan Gobolkaas ee Cabdi Qeybdiid iyo ninka kale ee heybta wadaagan ee Jaamac lagu magacabo ka damacsan yihiin halkaas.
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Nuur Cadde waxaa uu sheegay in haddii Maamul loo dhisayo Gobolkaas looga baahan yahay in xukuumaddiisa Maamusho balse cid kale aan soo fara gelin Karin.
Hase yeeshee Gobolka Shabellaha Hoose oo ah gobol istiraatiiji ah ayaa mudooyinkan waxaa ka taagnaa qalalaaso siyaasadeed oo u muuqda mid loolan ah, taasoona Madaxweynaha laftiisa uu qeyb ka ahaa qalalaasaha Gobolka ka jira ee ku aadan hanaanka Maamulka.
← Ciidamada Mujaahidiinta MMIS oo ku qab-abtay magaalada Mahadaay 10 qof oo ljibisay Bandowgii lagu soo rogay magaaladaas
Ciidamada AMISOM oo qarax xoogan lagula beegsaday deegaanka KM-4 ee magaalada Muqdisho. →